Mini Horror ရုပ်ရှင် ကြည့်ရသကဲ့သို့ဖြစ်စေမည့် ကြောက်မက်ဖွယ် ဓာတ်ပုံ ၁၅ ပုံ - ONE DAILY MEDIA
– တစ္ဆေခြောက်ရုံသာမကပဲ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေမည့်အရာများ
“တစ္ဆေခြောက်သည်” ဟူသော စကားလုံးကို ကြားသောအခါတွင် လူအများစုက Halloween အကြောင်းနှင့် အနည်းငယ်ကြောက်စရာကောင်းသော အရာများကို တွေးတောမိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်မေ့ပစ်နိင်ကြပါတယ်။ ၎င်းသည် သင့်တစ်သက်တာလုံးအတွက် အိပ်မက်ဆိုးများမပေးနိုင်ပါဘူး။ ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် တစ္ဆေခြောက်ခြင်းများထက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကြောက်စရာ” ဟု ဆိုသောအခါ အိပ်မက်ဆိုးများကို ဆိုလိုပါတယ်။ ညဘက် အိပ်ယာနိုးထလာစေအောင် သင့်အခန်းထဲမှာ အချိန်တိုင်း မီးလင်းနေစေပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာ သင့်ကိုရူးသွပ်စေတဲ့အရာတွေဟာ သင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ ကြုံရာကျပန်းအသံ တွေပါပဲ ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ “ကြောက်စရာ” စံနှုန်းများသည် အလွန်မြင့်မားပါတယ် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုသူများကို ကြောက်ရွံ့မှုပေးလိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးကတော့ Horror Fan တွေအတွက် အားရစရာပါပဲ။
Mothmeister သည် “သေဆုံးသွားပြီးနောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း” များဖော်ပြထားသည့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Instagram အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ရုပ်ပုံများသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီး ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်တစ်ခုလိုပါ။ သူတို့ကို ကြည့်ရုံနဲ့ သင့်ကို ကျော ချမ်းစေပါမယ်။ အသေးစိတ် သင်ပိုကြည့်လေ၊ ပိုထူးဆန်းလာလေဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံကို ပိတ်ပစ်လိုက်ချင်တဲ့အထိပါပဲ။ မင်းရဲ့ကြောက်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပုံတချို့ကို အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
1. Prada ဝတ်နတ်ဆိုး
2. The Alice in Wonderland မှ ကွဲပြားသောယုန်
3. ဝက်ကိုလူထက်ပိုစိတ်ဝင်စားပုံရသော ဂြိုဟ်သားများ
5. ဆေးရုံမှာလမ်းလျှောက်ထွက်လာသော အလောင်း
6. arachnophobia ဖြစ်စေမည့်ပုံ
ဒီပုံတွေ အားလုံးမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို စိုက်ကြည့်လေ ပိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေ လေပါပဲ။ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်ခဲ့တာလား။ ရုပ်ရှင်များလား ? စာအုပ်တွေလား? Creepypasta ဇာတ်လမ်းတွေလား ?? ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ဒါ​တွေ​တွေ့​ရတာ ​ပျော်​ပါတယ်​။ တစ်စုံတစ်ဦးကို ကြောက်လန့်စေလိုပါက ဤအရာများက အသုံးဝင်လှပါတယ် ။ ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပုံတွေအတွက် အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါ။
9. အသတ်ခံရမည့် ဝက်တစ်ကောင်မဟုတ်ပါဘူး သူတပါးကိုသတ်မည့်ဝက်ပါ
10. Kylie lip challenge မှာပါဝင်လာသူ
11. အနားကပ်လာရင်တော့ ပြေးဖို့အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ
12. ကြောင်လေးကြောင့်ကလွဲရင် အနားမကပ်ရဲပါဘူး
13. Minotaur ဟာဒီလိုပုံလို့တစ်ခါမှ မတွေးဖူးပါဘူး
14. မျောက်၏မျက်လုံးကို ကြည့်ပါ ၊ တသက်စာကြောက်ရွံ့စေမှာပါ
15. ကလေးချီရမယ့်အစား အရုပ်လေးချီထားတာ ပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်
ဒီပုံတွေက သင့်ကို ကျောချမ်းစေသလား။ သင့်ကို ကြောက်အောင် လုပ်မိသွားလား ? တခြားသူဆီ ကြောက်အောင် ဆက် ပို့ပေးလိုက်ပါ ။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ဤကြောက်စရာကောင်းသောပုံများနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကို မျှဝေခဲ့ပါ …
မိတ်ကပ်ပညာတစ်ဦး၏ ရူးသွပ်လောက်စရာ လက်ရာမြောက်ဖန်တီးမှုပုံ (၁၁) ပုံ